Aingam-panahy, tolona, rabiraby talohan’ny nahatongavan’ny Espaniôla : Ny zavakanton’i Manuel Ruelas avy ao Meksika · Global Voices teny Malagasy
Antsafa iray niarahana tamin'ilay Meksikàna mpanao sokitra sy hosodoko
Voadika ny 05 Mey 2020 14:08 GMT
Vakio amin'ny teny English, Italiano, Esperanto , Français, русский, عربي, 日本語, Português, Español
“Mick sy tecutli”. Woodcut 2017, sary nahazoana alàlana tamin'ilay artista.
Manuel Ruelas dia artista sady mpanao hosodoko avy ao Jalisco, andrefan'i Meksika, fantatra kokoa amin'ny hoe Fases, izay ny asany dia mipetraka eo amin'ny fihaonan'ny fampiroboroboana ny fanjifàna, ny fifindràmonina, ary ny resaka faritàny. Ny taokantony ihany koa, izay maneho rabiraby sy fisaintsainana, dia fifangaroana taokanto talohan'ny nahatongavan'ny espaniôla sy ny kolontsaina pop amin'ny fiainana andavanandro. Samy efa natrehan'i Ruelas ireo hetsika teo an-toerana sy iraisampirenena, toy ny andiany faha-6 amin'ny hetsika fanao isaky ny roa taona amin'ny sokitra Szeklerland ho an'ny taona 2020 sy ny andiany faharoa amin'ny “Taokanto Lumen fanao isaky ny roa taona” ao Meksika.
Aingampanahy avy amin'ny atrikasa TGP “Taller de Gráfica Popular” no manosika ny asany, izay tondro manavaka ny taokanto maoderina meksikàna. Ity atrikasa ity no sekoly ho an'ireo artistra maro mpanao sokitra, toa an'i Leopoldo Méndez, Pablo O'Higgins, ary Luis Arenal Bastar, ary niampanga ny adin-tsaranga tamin'ny fampiasàna ireo marika meksikàna sy ireo singa malaza.
Ruelas koa dia miresaka ny endrika ivelany amin'ny taokanto Chicano, izay miavaka amin'ny fanehoana ny ara-pinoana, politika, ireo marika indizeny, itarafana ny olana sôsialy sy ny “maha-izy ny tena” manodidina ny toe-piainana amerikàna-meksikàna. Eken'i Ruelas ihany koa ny fisian'ny dindo arak'endrika avy amin'ny “Expressionism” Alemàna ao anatin'ny asany.
Amin'izao fotoana izao, sady manao hosodoko izy no manao fitomboka ao anatin'ny toerampiasana izay sady toerana fampirantiany “Barranca Gráfica Workshop-Gallery“, izay ankehitriny ahitàna birao roa sy toerana iray fampirantiana. Ny birao ao Meksika dia ao akaikin'i Condesa, iray amin'ireo toerana ara-kolontsaina tena manana ny lanjany indrindra ao Meksika; ny birao any Etazonia dia ao Oakland, Kalifôrnia, izay ipetrahany amin'izao fotoana izao. Mitantana ireo toerana roa ireo izy.
Taona iray eo ho eo izay, mba nanana fahafahana niasa tao anatin'ity atrikasa Barranca Gráfica ity tany Meksika aho ary nihaona taminy. Aborak'ity antsafa manaraka niarahako tamin'i Manuel Ruelas ity ny zavatra nanainga ny fanahiko tamin'ny asany sy ny vina artistikany.
“Ny vintana ratsin'ny finoana.” Sokitra mivoitra, 50 x 70 cm, 2019, sary nahazoana alàlana tamin'ilay artista.
Alejandro Barreto: Feno fanarabiana ny asanao. Mitodika mankany amin'ny inona ny kiana ataon'i Manuel Ruelas ?
Zavatra tsy afaka misaraka amin'ny kolontsaina meksikàna ny vazivazy sy ny rabiraby, mitombo izahay, miaina ary maty miaraka aminy; nampiasaina ny vazivazy ho toy ny fiara iray entina miady sy miatrika ireo fahasahiranana ary zava-maharary eto amin'ity firenena ity. Ho ahy manokana, mandeha ho azy toa voajanahary tsy misy ahiahy izany, nanome ahy fahafahana mitàna toerana pôlitika sy manao kiana manoloana ireo tranga manantantara. Ny toedraharaha sôsialy, ny fifangaroan'ny fahantràna, herisetra ary kolikoly no lasa zavamisy iainana ao Meksika, fiarovana mitoetra [io] ao anaty tanàna iray izay manao ny hampihenjana ny mponiny. Ao Meksika, misy ny fanindrahindràna ady sy fifanenjehana amin'ny endrika maro, any anatin'ny tontolon'ny fanatanjahantena, ny pôlitika, ny fivavahana ary ny fahitalavitra. Andramako tehirizina ny zava-miseho iray, izay ampahany amin'izany izahay: ny zava-maharary ny fiarahamonina, izay miainga avy amin'ny ianao marary, na lasa mahantra kokoa, mahery setra, na manao kolikoly. Ary ny zava-maharary farany dia ny fahafatesana, izay no antony mahatonga azy io ho fotokevitra tsy misaraka amin'ny asako.
AB: Raha ny hevitrao, inona no toerana tazonin'ny taokanton'ny làlana ao anatin'ny fiarahamonina erantany ankehitriny?
MR: [Ny taokanton'ny làlana] mamadika ny fampisehoana ho demaokratika kokoa, afaka manao azy daholo izay rehetra olona na artista maniry ny hilaza zavatra na hanao sary, ary amin'io fomba io entin'izy ireo ny hafatra ho any amin'ireo olona tsy mbola niditra velively tranombakoka na toerana fampirantiana. Ny olana goavana ho ahy androany dia ny hoe takatr'ireo renivohitra lehibe ilay izy ary navadik'izy ireo hitodika any amin'ny resaka famarotana sy fanandràtana vokatra iray, loharano iray ho an'ny fanitàrana tanandehibe ho an'ny mpanambola, izay mahatonga azy ho lasa poakaty sy ho haingo sisa, lasa hevitra tsara ho an'ny ‘selfies’, sy ireo dokambarotra midadasika be. Fa mbola, mbola misy koa ireo artista goavana mijoro hentitra sy tsy mivaona amin'ny fomba fijeriny ny atao hoe taokanto.
AB: Ankehitriny ianao monina any Etazonia. Nanova ny fomba fijerinao ny kolontsaina meksikàna-amerikàna ve izany raha ampitahaina amin'ny fony ianao nonina tany Meksika?
MR: Ho ahy, ny teboka fanombohana sy fifandraisana amin'ny kolontsaina meksikàna-amerikàna dia ny fotokevitra Nepantla, teny indizeny Nahuatl iray tena manandanja be ho anay Meksikàna, izay midika “eo anelanelany”, eo afovoany”. Ny zavatra azo tamin'ny niainana ao Etazonia dia nitarika ahy hitrandraka ireo zotran'ny faniriana, ny ahy sy ny an'ny daholobe “eo anelanelany”, araka izany io fotokevitra io dia tena hita be ao anatin'ny asako. Mandritra izany fotoana izany, angoniko ireo tantara momba ny fanavakavahana, ny fankahalàna vahiny, ny fanilikilihana, fa koa mikasika no fihoarana, ny fandrindràna, ny vondrompiarahamonina ary ny tolona.
“Smoking Black Mirror”. Sokitra Lino, 15 x 20cm, Sary nahazoana alàlana avy amin'ilay artista.
AB: Misy betsaka ny resaka momba ny kolontsaina pop sy ny kabary momba ny faritàny. Ahoana no fiasan'ireo fotokevitra roa ireo aminao, amin'ny maha-artista?
MR: Fototra niaingan'izy ireny ireo anganon'ny ntaolo momba ireo Meksikasy (Mexicas) na ny Azteky nifindra monina avy any Aztlán [hankaty amin'ny Mexico City fantatsika amin'izao fotoana izao io], ary ny fananganana maripamantarana ara-paritra. Nandao ny taniny ireo mponina tao Aztlán, ry zareo Aztecs, hitady ilay tany nampanantenain'ireo Andriamanitra. Noho ny baikon'i Huitzilopochtli, ilay andriamanitry ny ady sy ny masoandro, nanomboka fivahinianana masina ry zareo mandra-pifanenany taminà voromahery iray nihinana bibilava, nisintirintirina teo ambony raketa iray, dia nanorina an'i México-Tenochtitlán [ Mexico City ankehitriny]. Ho ahy, manana lanja ara-kolontsaina, mamakivaky sisintany, ary ara-pifindràmonina io tantara io, ary miaraka aminy no tiako nanorenana tetezana eo anelanelan'ny tena sy ny “hafa”, fifangaroan'ireo marika ahafantarana ny Aztec, saingy nataon'ireo mponina tao an-toerana ho idealy na kolontsaina malaza, sy naveriny naseho masoandro tamin'ny endrika kolontsaina vaovaon'ny fanjifàna faobe. Ireo singa amin'ny fanjifàna faobe malaza sy ireo niankohofan'ny ampira azteky. Anarana, toetra amam-bika iraisan'ny rehetra, ary marika hita eny anatin'ny kolontsaina iraisanay. Ireny fizàrana maka sy mampivady ireny dia nanosika ahy hikaroka ny dika vaovaon'ireo kisary, hamerina mandrafitra ny fitantaràna nataon-dry zareo sy hanome azy ireny fomba vaovao ho fisoloana tena.
“Fisarahana aho roa”. Sokitra Lino, 15 x 10cm, Sary nahazoana alàlana avy amin'ilay artista.
Afaka mahita maromaro kokoa amin'ny asan'ilay artista ianareo, ao amin'ny kaontiny Instagram.